Manchester United Oo Bixinaysa Lacag Lagu Burburinaayo Qandaraaska Goncalo Inacio.
HomeWararka CiyaarahaManchester United oo bixinaysa lacag lagu burburinaayo Qandaraaska Goncalo Inacio.
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay isku diyaarinayso inay buuxiso lacagta lagu burburin karo qandaraaska Goncalo Inacio ee Sporting Lisbon si ay ula soo saxiixato daafaca dhexe inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
20-sano jirkaan ayaa fure u ahaa kooxdiisa Portugal intii lagu jiray ololihii 2021-22, isagoo u saftay 44 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay shan gool iyo labo caawin.
Inacio ayaa wali wax ka badan afar sano uga harsan tahay inuu ku sii socdo qandaraaskiisa haatan, laakiin waxaa la rumeysan yahay inuu jiro €45m (£38.5m) oo lagu burburin karo heshiiska, taasoo Sporting ay si buuxda u dalban doonto si ay ugu ogolaato inuu baxo.
Sida laga soo xigtay A Bola , Man United ayaa da’yarkan u aqoonsatay bartilmaameedka ugu horeeya ee suuqa kala iibsiga waxayna diyaar u yihiin in ay ka soo baxaan lacagta ay ku iibsanayaan heshiiskiisa si ay u helaan saxiixiisa, tababaraha cusub ee Erik ten Hag ayaa u arka xiddiga ugu fiican ee kor u qaadi kara difaaca kooxda.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda heysata horyaalka Ingariiska ee 20-ka jeer ay diyaarineyso dalab ay Sporting ku heli karto €40m (£34.2m), iyadoo 5 milyan oo kale (£4.2m) lagu daro.
Inacio, oo sidoo kale si xoogan loola xiriirinayey Newcastle United, wuxuu ku sugnaa Cagaaran iyo Cadaanka tan iyo 2012, isagoo ka soo gudbay kooxahooda kala duwan ee dhalinyarada ka hor inta uusan safan kulankiisii ​​​​ugu horeysay ee 2020.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee da’doodu ka hooseyso 21 jirada Portugal ayaa u saftay kooxdiisa haatan 69 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay 7 gool iyo afar caawin.